China Drop Point Meter ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang တူရိယာများ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Dropping Point နှင့် Softening Point Tester > အလိုအလျောက်ကျဆင်းစေသော Point နှင့် Softening Point Tester > Drop Point မီတာ
Drop Point မီတာ
Drop point meter သည်တိကျသေချာသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာနှင့် high-definition video camera နည်းပညာတို့ကိုစုံလင်စွာပေါင်းစပ်။ သုံးစွဲသူများအားတိကျ၊ တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစမ်းသပ်မှုရလဒ်များပေးရုံသာမကသုံးစွဲသူများအားထိရောက်အဆင်ပြေစေသောစမ်းသပ်မှုအတွေ့အကြုံကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ High-definition video သည်နမူနာအခြေအနေပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုလွယ်ကူစွာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပြီးနမူနာ drop point/softening point ကိုတိကျစွာတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသူများအတွက်အဆင်ပြေစေသော real-time graph display ကိုအလိုအလျောက်ထောက်လှမ်းပေးသည်။ စံအဆီခွက်နှင့်တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်းသည်ရလဒ်များ၏တိကျသေချာစေနိုင်သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send PDF ကို Download လုပ်ပါ
Drop point မီတာ perfectly combine high-precision temperature control technology and high-definition video camera technology, not only to provide users with accurate, stable and reliable test results, but also to bring users efficient and convenient test experience. High-definition video can easily and clearly see the whole process of sample state change, and automatically detect real-time graph display, which is convenient for users to accurately measure the sample drop point/softening point. The standard fat cup and measurement method can ensure the accuracy of the results.
1. Drop point မီတာ Introduction
*2: one-key အလိုအလျောက်တိုင်းတာခြင်းကိုအပြည့်အဝအလိုအလျောက်သဘောပေါက်ခြင်း၊
2. Drop point မီတာ Parameter
0.1-20â„ ƒ/ မိနစ်
± ၀.၂â„ ƒ (ï¼œ၂၅၀â„ ƒ)
±0.5â„ ƒ (ï¼ž250â„ ƒ)
၅.၆ လက်မ + ၄.၃ လက်မအရောင် display
တစ်သုတ်လျှင် ၂ လုံး
ဒေတာ interface ကို
USB RS232 network port
220 V 50Hz 120W
21CFR အပိုင်း ၁၁၊ စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်း၊ လျှပ်စစ်လက်မှတ်
3. Drop point မီတာ Feature And Application
1: HD ဗီဒီယိုအမြင်အာရုံနမူနာအပြောင်းအလဲများ;
4: အချက်အလက်များကိုပရင်တာမှတဆင့်တိုက်ရိုက် print ထုတ်နိုင်သည်။
၅။ 21CFR အပိုင်း ၁၁၊ စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်း၊ Pharmacopoeia 2020 နှင့်အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်၊
4. Fields of use Drop point မီတာ
အလိုအလျောက် droplet point နှင့် softening point tester သည်ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနများတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္မှပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည် droplet point နှင့် asphalt, asphalt, polymers, resins, paste, wax နှင့်အခြားပစ္စည်းများအတွက်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
JiahangDrop point မီတာ has obtained CE certification, TART certification, ISO quality management system certification, more than 10 software copyrights and multiple patents to ensure that each instrument has stable performance and excellent quality.
၆။ ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဥရောပနှင့်အမေရိကမှပြန်လာသောထိပ်တန်း R&D အဖွဲ့ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့၊ ကျွမ်းကျင်သောအရောင်းအဖွဲ့နှင့် ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့တို့နှင့်ပူးပေါင်းပြီးဖောက်သည်များအားအဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ထိရောက်၊ အဆင်ပြေ၊ ဘက်စုံကြိုရောင်းအားပေးနိုင်ရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်သည်။ နှင့်ရောင်းအားအတတ်ပညာ ၀ န်ဆောင်မှုများ။
မေး။ ။ မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီက Drop Point Meter လုပ်လာတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ။
A: သိပ္ပံနည်းကျတူရိယာထုတ်လုပ်သူ ၂၂ နှစ်၊ ဓာတ်ခွဲခန်းဖြေရှင်းသူပံ့ပိုးပေးသူ။
A:Jiahang သည်တူရိယာတစ်ခုစီတွင်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အသွေးကောင်းများရရှိစေရန်သေချာသော software မူပိုင်ခွင့် ၁၀ ခုနှင့်မူပိုင်ခွင့်များစွာရရှိထားသည်။
A:ဟုတ်တယ်၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းငါတို့Arablabã, PICCTONã, Analytica Russia, Lab Lab Africa, Analytica Latinã, Analytica Latin တို့လိုငါတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်တွေကိုဖွင့်ဖို့နှစ်စဉ်နိုင်ငံတကာနာမည်ကြီးပြပွဲတွေမှာပါ ၀ င်ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏လည်ပတ်မှု
မေး။ ။မင်းကုမ္ပဏီရဲ့ R&D အင်အားကဘယ်လိုလဲ
A:ခိုင်မာသော R&D နည်းပညာဆိုင်ရာစွမ်းရည်များ (ပျမ်းမျှအလုပ်အတွေ့အကြုံ ၈ နှစ်ရှိသောနာမည်ကြီးဒေါက်တာများနှင့်လူ ၂၀ ကျော်ပါ ၀ င်သော R&D အဖွဲ့သည်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ) ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သောနည်းပညာပြဿနာများ
မေး။ ။OEM လက်ခံနိုင်လျှင်
A:OEM စိတ်ကြိုက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးပါ၊ ထုတ်ကုန်တွင်ပါ ၀ င်သော software သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆက်တင်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်
မေး။ ။သင်သည်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ (သို့) ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသလား။
A:၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းထုတ်လုပ်သူ၊ ပွဲစားများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများကစျေးနှုန်းကွဲပြားမှုမရှိစေဘဲအရင်းအမြစ်စက်ရုံ၏စျေးနှုန်းသည်အလွန်အားသာချက်ရှိသည်။ Jiahang သည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ဟိုင်းတွင်အခြေစိုက်။ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ခွဲ ၁၅ ခုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ ၂ ခုရှိသည်။
A:"ယေဘုယျအားဖြင့်သင်၏ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံပြီး ၇ ရက်မှ ၁၅ ရက်ကြာလိမ့်မည်။ ပမာဏပေါ်မူတည်သည်။ "
A:ငါတို့သည် L/C, TF, Paypal, Western Union စသည်တို့ဖြင့်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံနိုင်သည်။
A:ကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုကိုပေးနိုင်သည်။ video-ca (သို့) အသံချတ်ဖြင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီပံ့ပိုးမှု
A:ပထမဆုံးအကြိမ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောမည်သည့် ၀ ယ်သူမဆိုကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏စိုးရိမ်မှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်စျေးနှုန်းအစမ်းအခွင့်အလမ်းကိုပေးလိမ့်မည်ဟုကတိပြုသည်။
A:တရား ၀ င်အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ကိုက်ညီသောတရားဝင်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအာမခံစာရွက်စာတမ်းများကိုပေးပါ။
hot Tags:: Drop Point Meter၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE